अमेरिका – Page2– Lokpati.com
Lokpati - Best News Portal of Nepal शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०७६
अमेरिका सरकार पक्राउ प्रधानमन्त्री राशिफल नेपाल प्रहरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन मृत्यु केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस अपराध नेकपा
अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजाने सहमति
एजेन्सी। तालिबान लडाकु समूहसँगको ‘सैद्धान्तिक सहमति’ अनुरुप अमेरिकाले २० हप्ताभित्र अमेरिकी सेना फिर्ता लैजान लागेकोद छ। ५४ सय अमेरिकी सेना फिर्ता लैजान लागेको वाशिङटनका एक उच्च वार्ताकारले बताएका छन्। अफगान नेताहरूलाई जानकारी गराएपछि…
व्यापार युद्धः ट्रम्पद्वारा चिनियाँ सामानमा नयाँ कर लागू
काठमाडाैं । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने त्रासका बीच नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न चीनमाथि दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्तराज्य अमेरिकाले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी चिनियाँ सामानको आयातमा नयाँ करहरु लागू भएको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी व्यापार…
अमेरिकाद्वारा आजदेखि नयाँ कर लागू
एजेन्सी। संयुक्तराज्य अमेरिकाले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी चिनियाँ सामानको आयातमा नयाँ करहरु लागू भएको घोषणा गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने त्रासका बीच नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न चीनमाथि दबाब दिने उद्देश्यले अमेरिकाले यस्तो नयाँ करहरु…
अमेरिकाले ल्यायो नयाँ आप्रवासन नीति , नेपालीसमेत प्रभावित
वाशिंटन डीसी, २८ साउन। अमेरिकाले नेपालीहरुलाई समेत प्रभावित बनाउने गरी नयाँ आप्रवासन नीति ल्याएको छ। नयाँ नियमअनुसार अमेरिका जान चाहने नेपालीहरुले यसअघि लागू भएभन्दा अधिक आयस्रोत देखाउनु पर्नेछ। नयाँ आप्रवासन नियम अनुसार अमेरिकामा वैध…
डिभी पर्नेमा नेपाल पाँचौं, यो वर्ष कति जाँदैछन् अमेरिका ?
काठमाडौं, २४ साउन। २०२० को अमेरिकाको डिभी चिट्ठा पर्नेमा नेपाल पाँचौं भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को भिसा बुलेटिन अगस्ट अंक अनुसार नेपालका ३ हजार ६ सय ९६ लाई डिभी परेको छ। उनीहरू पहिलो पत्र पाउने छन्। छान्ने…
अमेरिकामा फेरि बन्दुक आक्रमण : १० जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १९ साउन। अमेरिकामा पछिल्ला केही घन्टाभित्र दुई वटा बन्दुक आक्रमण भएका छन्। दोस्रो बन्दुक आक्रमण ओहायो राज्यको डेटोनमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान साढे १ बजेतिर भएको थियो। मध्य सहरमा एक जना बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली हानेका…
अमेरिकामा ठूलो गोलीबारी, २०को मृत्यु
एजेन्सी। अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा रहेको एक शपिङ मलमा गोलिबारी भएको छ। यसमा कम्तिमा २० मानिस मारिएको खबर छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार टेक्ससको एल पासो क्षत्रस्थित सीएलो विस्ता मलमा गोलीबारी भएको हो। यो स्थान अमेरिका–मेक्सिको सीमानाको केही…
अदुवा महोत्सवमा गोली हानाहान, चारको मृत्यु
सान होजे, १३ साउन। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा अदुवा महोत्सवमा बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा बन्दुकधारीसहित ४ जनाको मृत्यु भएको छ। क्यालिफोर्निया राज्यको गिलरोय शहरमा आयोजित गार्लिक फेष्टिभल भनिने अदुवाका परिकारको महोत्सव चलिरहेका बेला…
अमेरिका लैजाने नाममा कसरी लुटिँदैछन् नेपाली ?
मानव तस्करीमा अहिले नेपाली कला क्षेत्र पनि अछुत छैन भनेर फरक नपर्ला। केही समय पहिले राजेन्द्र खड्की जेल परिसकेका छन् भने अर्का निर्देशक सुदर्शन गौतमविरुद्ध छानबिन चल्दै आएको छ। बागलुङका सागर श्रीस (४४ जनाको ६५ लाख) म्याग्दीका लेक पुन (२२…
विमानमा आगलागी हुँदा १० को मृत्यु
काठमाडौं, १६ असार । एउटा सानो विमान आइतबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। अमेरिकाको टेक्सासमा एउटा सानो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ। विमानले आइतबार बिहान एडिसन एयरपोर्टबाट उडान भरिरहेको थियो तर अनियन्त्रित भएर ह्यांगरमा…
डा. भीमलाल गाैतम